Mofon’aina – TALATA 10 OKTOBRA 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – TALATA 10 OKTOBRA 2017
Fandresena, Vavaka, Vavolombelona
16 Ary ny mpanompon’ i Sankeriba mbola niteny ratsy an’ i Jehovah Andriamanitra sy Hezekia mpanompony,17 sady nanoratra taratasy hihaika an’ i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, sy hiteny ratsy Azy ka nanao hoe: Tahaka ny tsy nahavonjen’ ireny andriamanitry ny firenena tany amin’ ny tany hafa ny olony tamin’ ny tànako no tsy hahavonjen’ ny Andriamanitr’ i Hezekia ny olony koa amin’ ny tànako.18 Dia niantso tamin’ ny feo mahery izy ka nanao teny Jiosy teo anatrehan’ ny mponina tany Jerosalema izay teny ambonin’ ny mànda hampitahorany sy hampangorohoroany azy mba hahafahany ny tanàna.19 Ary Andriamanitr’ i Jerosalema koa dia mba nolazainy toy ny filazàny ireny andriamanitry ny firenena tany amin’ ny tany hafa ireny, izay asan’ tànan’ olona ihany.20 Ary noho izany dia nivavaka Hezekia mpanjaka sy Isaia mpaminany, zanak’ i Amoza, ka nitaraina tamin’ ny lanitra.21 Ary Jehovah naniraka anjely izay nandringana ny lehilahy mahery rehetra sy ny mpanapaka ary ny komandy teo an-tobin’ ny mpanjakan’ i Asyria, ka dia lasa nody amin-kenatra Sankeriba. Ary nony niditra tao an-tranon’ ny andriamaniny izy, dia namono azy tao tamin’ ny sabatra ny zanany naterany.22 Toy izany no namonjen’ i Jehovah an’ i Hezekia sy ny mponina tany Jerosalema tamin’ ny tànan’ i Sankeriba, mpanjakan’ i Asyria, sy tamin’ ny tanan’ ny fahavalony rehetra; eny, niaro azy tamin’ ny manodidina rehetra Izy.23 Ary ny maro nitondra fanatitra ho an’ i Jehovah tany Jerosalema sy zava-tsoa ho an’ i Hezekia, mpanjakan’ ny Joda; dia nalaza teo imason’ ny firenena rehetra izy hatramin’ izany.
2 TANTARA 32 :16-23
Hezekia dia Mpanjaka nanao izay mahitsy teo imason’ Andriamanitra (2 Tant 29 :2). Mpanjaka nivavaka izy , ary eto dia hita soritra fa niara-nivavaka tamin’i Isaia , Mpaminany izy mba hamonjen’ Andriamanitra ny firenena tsy ho resin’ny fahavalony . Namaly ny vavak’izy ireo Andriamanitra . Izany no herin’ny vavaka rehefa:
1-Resy lahatra ny mpitondra fanjakana
Mba hiadanan’ny vahoaka sady hisian’ny filaminan’ny tanàna dia tsy maintsy ny mpitondra aloha no resy lahatra hivavaka amin’ Andriamanitra. Koa na misy mihaika ny Anaran’ Andriamanitra aza dia tsy mihemotra amin’ny fivavahany izy. Mmampirisika ny mpanompoko mahatoky hifikitra amin’i Jesoa Kristy ny fanenjehana sy ny fanaratsiana Azy ankehitriny. Mahomby ihany koa ny fisian’ny fiaraha-mivavaky ny samy resy lahatra eo amin’ny fanoherana ny fahavalon’ny Filazantsara. Aoka ho resy lahatra isika fa tsy misy famonjena afa-tsy ao amin’i Jesoa Kristy irery ihany. Izy no Mpamonjy izao tontolo izao.
2-Mijoro vavolombelona ny fiangonana
Ny Mpaminany amin’ny andro ankehitriny dia ny fiangonana. Vonona mandrakariva hitondra ny hafatry ny Tompo ny fiangonana tahaka an’i Isaia Mpaminany (2 Mpanj 19 :2-7), maneho ny fandraisana andraikitry ny fiangonana amin’ny loza manjo ny fireneny izany .Rehefa mijoro vavolombelon’ny Tompo ny fiangonana dia miasa eo amin’y tanàna misy azy tokoa ny Tompo , mamonjy ny vahoaka rehetra . Hankasitrahan’ Andriamanitra ny vavaky ny mpitondra sy ny fiangonana ho an’ny firenena.